नेपालका विभिन्न घटनाक्रमपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरु – Lokpati.com
सरकार मृत्यु प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पक्राउ नेपाली काँग्रेस केपी शर्मा ओली नेकपा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड राशिफल प्रचण्ड अपराध नेपाल प्रहरी अमेरिका चितवन
नेपालका विभिन्न घटनाक्रमपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरु
By लाेकपाटी न्यूज Last updated Feb 22, 2020
काठमाडौं । आजको नेपाली राजनीतिक परिवर्तनसम्म आइपुग्न नेपाली इतिहासमा विविध घटनाक्रमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । नेपालको विभिन्न घटना र त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरुको सङ्कल गरी तयार पारिएको छ ।
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि वि.सं. २००७ सालमा भएको आन्दोलनपछि पहिलो पटक मोहन शमशेर ज.ब.रा. प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रुपमा २०१५ सालको आम निर्वाचन पछि विश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि डा. तुलसी गिरि प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
नेपालमा जनमत संग्रह हुँदा र त्यसपछि समयमा समेत सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । २०४७ सालको जनआन्दोलनपश्चात प्रजातन्त्रको पूनस्थापनासँगै कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए । वि.सं. २०६२।६३ सालको आन्दोलन पछि गिरिजाप्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गणतन्त्र घोषणा भएपछि सोही वर्षको साउनसम्म गिरिजाप्रसाद कोईराला प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।
सार्क स्थापना हुदाको समयमा लोकेन्द्रबहादुरचन्द नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना हुँदा जुद्ध शमशेर ज.ब.रा.नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । प्रथम विश्व यु्द्ध हुँदा चन्द्र शमशेर नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । दोस्रो विश्व युद्ध हुँदाको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर ज.ब.रा प्रधानमन्त्री थिए । नेपाल र चिन बिचको थापाथली सन्धि हुँदाको समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा थिए ।
भारत सँग बिप्पा सम्झौता नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्दाको समयमा नेपालको प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोईराला थिए । नेपालमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा प्रधानमन्त्री शुसिल कोईरालाले गरेका हुन् ।
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा पछिका प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली हुन्। वर्तमान प्रधान मन्त्री पनि खड्ग प्रसाद शर्मा ओली हुन् ।
दुई वर्षपछि इम्बोस्ड नम्बर खुला गर्ने तयारीमा
लाेकसेवाकाे तयारी गर्दा के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
शुक्रबारको राशिफल: तपाईको आज कस्तो छ ?
लोकसेवा आयोगले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी (सूचनासहित)
भाइरसले शरीरमा कसरी आक्रमण गर्दछ ?